Baphika eyokugula kwenkosi yakwaShembe | isiZulu
Baphika eyokugula kwenkosi yakwaShembe
Izizathu zaseBuhleni zokuphikisa inkantolo
ISEYINDE indlela kolwamaNazaretha
IMisebeyelanga ithi ayinanxa noNyazilwezulu - Umbiko
Durban - Kubikwa ukuthi iyelulama iNkosi yamaNazaretha uVelamuhle Imisebeyelanga Shembe, ngemuva kokuxinwa wukugula okungadalulwanga emasontweni amabili edlule.
Imisebeyelanga kubikwa ukuthi ingeniswe esibhedlela esizimele eThekwini emuva kokuxinwa wukuhlabeka. Abasondelene nayo bathi kuye kwaphoqa ukuba iphuthunyiswe esibhedlela odokotela basheshe bayinyanga yabuyela ekhaya, kubika ILANGA LangeSonto.
"Sizobe sinayo emgidini entabeni. Bekuwumkhuhlane nje ophatha bonke abantu futhi kuyinto eyiyijwayele ukuba ihlale iyohlolwa impilo njengoba isebenza ngokuzikhandla emsebenzini webandla," kusho uMnu Nkululeko Mthethwa okhulumela uhlangothi lwaseThembezinhle.
Uqhube wathi: "Siyazi ukuthi kukhona esizwa ukuthi besebesabalalise amanga okuthi inkosi ibangwa nezibi esibhedlela. Akunjalo, phansi amaphaphu kubalandeli bethu. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo thina".
Kuzwakala le mibiko nje Imisebeyelanga iwine icala lombango wobuholi kulelibandla lamaNazaretha, obuphakathi kwayo neNkosi uMduduzi Nyazilwezulu Shembe.
Inkatolo inqume ukuthi yiyo (Imisebeyelanga) engumholi waseBuhleni owaqokwa ngencwadi yiNkosi uVimbeni Thingolwenkosazane Shembe.
Lesi sinqumo sichithiwe ngabohlangothi lwaseBuhleni, bafaka isicelo sokwedlulisa isinqumo okulindeleke ukuba silalelwe ngamaJaji ayisihlanu eNkantolo eNkulu eThekwini uma esephothule ukuhlaziya izethulo zanhlangothi zombili ngonyaka ozayo.
Umbango wosikhundla uqale emuva kokuhamba emhlabeni koThingolwenkosazane ngonyaka wezi-2011.
Jhb: 10-23°C Bloem: 6-24°C
Dbn: 18-26°C PE: 13-21°C
Diepkloof - 09:16:21 AM EXPECT DELAYS going through the Diepkloof Interchange Ezinye zasemigwaqeni